२५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:२२
काठमाडौं, भदौं २५ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कडाई गरिने भएको छ ।
खासगरी नेता र सरकारका काम कार्वाहीबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाउन खोजिएको हो ।
दुई अध्यक्षले स्थायी कमिटीमार्फत् कार्यकर्ताहरुले नेताविरुद्ध लेख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।
अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले स्थायी कमिटीमा पेश गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेताका कर्ममाथि टिप्पणी गर्न कार्यकर्तालाई रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
यता अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्ताव सचिवलाय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यले पढ्नै नपाई सार्वजनिक गरिएका असन्तोषका श्वर पनि सुनिएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले नै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै फेसबुकमार्फत ‘नेकपा कम्ति पारदर्शी छ त !’ भन्दै व्यंग्य कस्नुभएको हो ।
रिजाल फेसबुकमा, ‘नेकपा कम्ति पारदर्शी छ त ? कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन छलफल त के सचिवालय सदस्यकै हातमा नपुग्दै पीडीएफ फाइल नै बाहिर आयो । अध्यक्षद्वयले तयार गरेको प्रतिवेदन स्थायी समिति सदस्यहरुको हातमा पुग्दा नपुग्दै हुबहु सार्वजनिक भयो । छलफलै नभई सार्वजनिक गर्न कति हतार हो ? बैठकमा सम्म त पेश हुन दिए हुने नि !’, लेख्नुभएको छ ।
Categories Select Category Auto (343) Blog (3) English (835) Entertainment (463) Finance (797) Nepali (8,510) Sports (5,680) Tech (1,493) World (3,032)